मौसम सम्बन्धी पूर्वसूचना दिने रेडियो डिटेक्सन एण्ड रेन्जिङ ‘राडार’को औपचारिक सुरु::KhojOnline.com
मंसिर, काठमाडौं । मौसम सम्बन्धी पूर्वसूचना दिने रेडियो डिटेक्सन एण्ड रेन्जिङ ‘राडार’को औपचारिक सुरु भएको छ । एक वर्ष अगाडि सुर्खेतको रातानाङलामा निर्माण गरिएको राडारको मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले उद्घाटन गरेका हुन् ।
संघीय मन्त्रीले काठमाडौंबाट गएर राडार उद्घाटन गर्दा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने कार्यक्रममा देखिएनन् । उनले लामो समयदेखि जल तथा मौसम कार्यालय सुर्खेतबाट नसार्न केन्द्र सरकारसँग माग गरिरहेका थिए ।
राडार उद्घाटन हुँदा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत पनि वीरेन्द्रनगर मै थिए । आयोजकका अनुसार उनलाई कार्यक्रम आमन्त्रणसमेत गरिएको थियो । तर, उनी कार्यक्रममा सहभागी भएनन् ।
‘वन मन्त्री पनि आउनु भएको थियो तर कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएन’, विभागका एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने । यसअघि विभाग रहेको वन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री मन्त्रालयबाट विभाग खोसिएको र कर्णालीमा रहेको कार्यालयसमेत खोसेर प्रदेश ५ मा लैजाँदा उनी सन्तुष्ट थिएनन् ।
यद्यपि, अन्य कार्यक्रम पनि भएकोले मन्त्री बस्नेत र मुख्यमन्त्री शाही उद्घाटनमा सहभागी नभएको बताइएको छ ।
सुर्खेत-दैलेख सीमा क्षेत्रमा तीन वर्षअघि निर्माण सुरु भएको राडारको काम करिब एक वर्ष अगाडि नै सम्पन्न भएको थियो । तर, प्राविधिक कठिनाइ र केही प्रशासनिक कारण सुरु हुन सकेको थिएन ।
राडारको मंगलबार औपचारिक उद्घाटन गरिए पनि अझैं यसबाट सूचना संकलनको पूरा काम हुन केही समय लाग्ने विभागका एक कर्मचारीले बताए । ‘एक वर्ष अगाडि निर्माण सम्पन्न भएको थियो अहिले औपचारिक उद्घाटन भयो । पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन अझै केही समय लाग्छ । तर त्यो वर्षा अगाडि नै हुन्छ,’ उनले भने ।
संघीय संरचनाअघि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय हावापानी कार्यालय थियो । जसले दुई विकास क्षेत्रको मौसमी विवरण संकलन तथा वितरण गर्थ्यो ।
राडारले के गर्छ ?
यो मौसमको पूर्व सूचना दिने अत्याधुनिक प्रविधि हो । ‘वेदर सर्भिलेन्स राडार’ समेत भनिने मौसमी राडारको सहायतले वषर्ाको गति, मात्रा, हावाको बहावको मापन र चट्याङ-हावाहुरी आदिीको पूर्वानुमान गर्न सक्दछ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मौसमका कारण हुने प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणका लागि देशका तीन ठाउँमा राडार जडान गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही अनुसार सुर्खेतमा जडान गरिएको हो ।
यसले साविकको मध्य तथा सुदूरसहित पश्चिमाञ्चल र भारतको केही क्षेत्रलाई कभर गर्छ । यसपछि पाल्पा र उदयपुरमा जडान गर्ने लक्ष्य छ ।
राडारको संचालन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग काठमाडौं र सुर्खेतस्थित कार्यालयबाट हुन्छ । मुख्यतः यसले २ घण्टा अगाडि मौसम सम्बन्धी सूचना दिन्छ । जसलाई ‘नाउ कास्टिङ’ भनिन्छ ।
यसबाट कति वर्षा हुन्छ ? बादल कहाँ छ र कति समयमा आइपुग्छ भन्ने सूचना पाइन्छ । साथै पानी मात्रै पर्छ कि असिना वा असिना पानी भन्ने जानकारी पनि हुन्छ । यही सूचनालाई थप विश्लेषण सम्भावित चट्याङ र बाढीपहिरोबारे नागरिकलाई सूचित गर्न सकिन्छ ।